Nchekwa ụmụaka - KiddyKoral na-enye nchekwa nke ụmụaka nọ n ’ebe a na-elekọta ụmụaka na ebe ana-elekọta ụmụaka | Ngwọta OMG
Nchedo ụmụaka - KiddyKoral na-enye nchekwa maka ụmụaka na ebe a na-elekọta ụmụaka na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Site na Mark Cowley, Infotronics International Inc.
N'Ugwu Zion Lutheran School na Boulder, Colorado, nchekwa agafeela nnukwu teknụzụ. "Ndị mmadụ chọrọ nchebe maka ụmụ ha," ka Mark Cowley, Onye isi oche nke Boulder, Infotronics International kwuru. Ha chọrọ ịma na ha nọ n'ọnọdụ dị nchebe. ” Mark Cowley bu nne na nna umu akwukwo abuo nke ugwu Zion.
Usoro a gụnyere igwefoto dijitalụ na nkà na ụzụ transponder na-agafe agafe iji nweta ụlọ akwụkwọ ahụ na usoro nchịkwa nwere ike ịnweta mgbanwe na usoro ntinye aka, mgbe ọ na-achịkwa mmegharị nke ụmụaka. A na-ewepụta foto foto nke nwa ọ bụla na nne na nna (s) ma debe ya na nchekwa data tinyere mkparịta ụka mberede na ozi ahụike maka nwa akwụkwọ ọ bụla. A ghaghị ịdebanye ndị na-elekọta ndị ọrụ nyere aka na nchekwa data na data ha jikọtara na ndekọ nwatakịrị ahụ site na kaadị SIM TROVAN ID pụrụ iche. Ndị nkụzi nwere ohere ngwa ngwa na foto, kọntaktị ezinụlọ na ihe ọmụma zuru ezu gbasara nwa akwụkwọ ọ bụla, gụnyere ọgwụ mgbochi ọrịa na allergies. "Anyị nwere ohere ozugbo iji nweta ihe ọmụma dị mkpa na ọnọdụ mberede," ka Cheryl Crabbs, onye nkuzi na Ugwu Zaịọn kwuru. "Maka ndị nkuzi ọhụrụ ndị na-ahụbeghị ndị nne na nna niile, e nwere foto dị na ya [na usoro] ka ha wee jide n'aka na ọ bụ nne na nna kwesịrị ekwesị, ọ bụrụgodị na onye ahụ enweghị kaadi."
Nzọụkwụ mbu nke nchebe na-amalite n'ọnụ ụzọ, nanị ntinye kpọmkwem n'ime ụlọ nlekọta nlekọta ahụ. Ndị nne na nna nwere katọn koodu pụrụ iche nke na-enyocha iji mepee mkpọchi nke ọnụ ụzọ. Ndị nne na nna nwere obi ụtọ na usoro ahụ. "Enwere m mmasị na ọ dị mfe na ngwa ngwa," ka Jennifer Turner, nne na nna na-ekwu. Ozugbo ndị nne na nna kpughere kaadị ahụ ọzọ na PC, ebe ha nwere ike ịlele ụmụ ha n'ime ma na-elekọta ụlọ. Usoro ahụ na-agbaso onye na-adaba ma weghachite nke ụmụaka n'oge, ruo na nkeji. Mgbe nwetakịrị nwa ahụ, a na-enyocha kaadi SIM na foto nke ụmụaka ndị jikọtara na kaadị ahụ gosipụtara maka onye ọrụ iji nye ikikere ntọhapụ.
KiddyKoral na-ejide oge nkwụsị na oge ntinye maka ịkọ ụgwọ ụgwọ ma nye ọtụtụ akụkọ iji nyere aka na nchịkwa ụlọ, ịnye aha na nsuso nke ịkwụ ụgwọ na ụgwọ.
Nzuzo 5887 2 Echiche Taa